ဘုရားသခင်၏ပြီးပြည့်စုံသောဒေါသ — ခရီးစဉ်လီ
ငါအချို့ကိုးကားဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်စတင်ချင်. ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုအနီးကပ် listen နှငျ့သငျကပြောပါတယ်ရဲ့ဘယ်မည်သောအကောင်နှင့်သဘောတူဖြစ်စေမအကြောင်းစဉ်းစား.
"ဒေါသသာလူမိုက်၏ရင်ခွင်၌ကျိန်းဝပ်။ " - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း
"ဒေါသတိုတောင်းတဲ့ရူးသွပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ " - Horace
"ဘာပဲအမျက်ဒေါသအတွက်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အရှက်ကွဲခြင်းအတွက်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ " - ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Franklin
"ဘာမှလုပ်ဘယ်တော့မှမ [အမျက်ဒေါသ၏ထွက်], သငျသညျမှားအရာအားလုံးပြုလိမ့်မည်။ " - paraphrase
အမျက်ဒေါသကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်အလိုရှိသောမဟုတ်တဦးတည်းသောသူတို့အားဇာတ်ကောင်စရိုက်များဖြစ်ပါတယ်. အဘယ်သူမျှမအမျက်ဒေါသ likes. အမျက်ဒေါသခါးသီးမှုနှင့်ကျင်းပနိုင်ရန်အာဃာတမှဦးဆောင်. အမျက်ဒေါသမကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှဦးဆောင်. အမျက်ဒေါသသည်တစ်ခါတစ်ရံပင်အကြမ်းဖက်မှုကိုဦးဆောင်. လူတွေကများသောအားဖြင့်မည်သည့်အခိုက်မှာလက်ကိုင်ပယ်ပျံသန်းစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဝှမ်းဖြစ်ချင်ကြပါဘူး. ဒါဟာတစ်နည်းနည်းမတည်မငြိမ်ပုံရသည်.
ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာငါ့အမေးခွန်းရဲ့: ဘုရားသခငျသညျအမျက်ထွက်ရပါဘူး? စကြဝဠာ၏ဘုရားသခရူးဆူပွက်စေနိုင်သည်တစုံတခုကိုမျှလည်းမရှိ? ကောင်းပြီကျနော်တို့စာသားကိုယနေ့ညနေပိုင်းတွင်ထိုမေးခွန်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်ထင်.
သငျသညျငါနှင့်အတူအဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ. ထှကျမွောကျရာမှာတော့ 17, သူတို့ကိုယ်တော်ကိုမယုံကြည်နိုင်လျှင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်နေဖြင့်ဣသရေလအမျိုးကိုစမ်းသပ်ဘုရားသခင်၏လူ. အရာအားလုံးပြီးနောက်သူကသူတို့ကိုအဘို့ပြုင်, သူတို့ကိုမိမိလူအောင်, ကျွန်ခံနေရာကနေသူတို့ကိုပို့ဆောင်, ဒါကြောင့်အပေါ်သူတို့အဘို့အပေးနဲ့, သူတို့နေဆဲကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြဘူး. ဒါကြောင့်သူတို့ကမောရှေနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်းနှင့်ယခုသူတို့ကိုရေပေးစေခြင်းငှါသူ့ကိုပြောပြ. သူသေဖို့တော၌သူတို့ကိုပို့ဆောင်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကသူ့ကိုမေးမြန်း. ထိုသူတို့ကအမှန်တကယ်မေးခွန်းမေးမြန်း, "သခင်ငါတို့တှငျ Is သို့မဟုတ်မ?"
ဤရွေ့ကား, ဤလူမြိုးသွင်ပြင်လက္ခဏာမူသောဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်မြည်တမ်းခြင်းနှင့်စောဒကမျိုးဖြစ်ပါသည်. တောလည်ရာမှအစာရှောင်ခြင်းရှေ့သို့ 14, နောက်ထပ်တစ်ခါ, နီးပါးထပ်တလဲလဲချိုးဖဲ့စံချိန်တူ, သူတို့တစ်ဖန်စောဒကနှင့်အပြန်အဲဂုတ္တုပြည်၌ဖြစ် သာ. ကောင်း၏လိမ့်မည်ဟု. သူတို့ကသူတို့ကိုကယ်နှုတ်သညျဘုရားသခငျကိုကိုးစားနှင့်သူ၏ကတိတော်များများကိုမစောင့်ဘဲ.
အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံးလူမျိုးကိုငါအမျက်ထွက်ခဲ့သည်; ငါကလည်း, "သူတို့ကအဘယ်သူ၏စိတ်နှလုံးကိုလမ်းလွဲသွားတဲ့လူဖြစ်ကြ၏,သူတို့က။ ငါ့လမ်းကိုမသိရကြပါပြီ "ဒါကြောင့်ငါသည်အမျက် ထွက်. ကြိနျဆိုအပေါ်ကြေငြာ, "သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့မဝင်ရကြလိမ့်မည်။ "
စာသားမှတဖန် Listen. ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏, "အနှစ်လေးဆယ်များအတွက်လူမျိုးကိုငါအမျက်ထွက်ခဲ့သည်…" ကောင်းပြီငါတော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးခွန်းကိုဖြေကြားထင်. ဘုရားသခငျသညျအမျက်ထွက်ရပါဘူး. ထိုသို့ကဒီအမျက်ဒေါသတုံ့ပြန်ပြောခြင်းငှါကြောင့်မိမိလူ၏အပွစျဖွင့်. သို့သော်လည်းငါသည်သူတို့၏အပွစျကိုသညျဘုရားသခငျအမျက်ထွက်စေဤနေရာတွင်မည်သည့်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သင့်တယ်ထင်ကြပါဘူး. ဤသည်ဘုရားသခင့အပြစ်တရားမှတုံ့ပြန်ပုံ.
ငါကောင်းတစ်ဦးဖခင်ခဲ့ကြီးပြင်း, မေတ္တာနှင့်စေ့စေ့နားထောင်သောသူနှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးတော်တော်လေးဆကျဆံရေးကောငျးခဲ့. ဒါပေမယ့်ငါတကယ်သူအတွက်ဖြစ်သွားခဲ့ရာစိတ်ဓါတ်များကိုသိဘယ်တော့မှ. ပစ္စည်းပစ္စယတွေသောအရပ်တို့ကိုမသွားကြဖို့လိုခငျြတဲ့သူတစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်အဘို့အဒါ, ငါဂိမ်းကစားခဲ့ရသည်တူငါမျိုးခံစားခဲ့ရ. ငါတစ်ခုခုအဘို့သူ့ကိုမေးခဲ့တယ်ခင်မှာ, ငါကြင်နာသူ့ကိုထွက်ခံစားရနှင့်သူ၌ရှိ၏စိတ်ဓါတ်များဘယ်လိုမြင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့. "ဘယ်လိုရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းသူတို့အား Cowboys, အဘ? သင့်ရဲ့ဆံပင်ညှပ်တာသေချာပါ။ ကောင်းတဲ့ကြည့် "ထို feeler မေးခွန်းတွေကိုအခုသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသူ့ကိုမေးမြန်းလျှင်ငါ့ကိုအထွက်တွက်ဆကိုကူညီလိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့်ငါ့အနည်းလမ်းများစုံလင်သောမ. ဒါနဲ့သူကဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်တုံ့ပွနျမညျဆိုပါကငါသေချာဘို့သိဘယ်တော့မှနိုင်ဟုမေးသောအခါ ("သေချာတာပေါ့, သား!") သို့မဟုတ်အမျက်ဒေါသ ("ငါ့မျက်နှာ outta Get, သား!"). သူကလမ်းအတွက်ခန့်မှန်းရခက်ခဲ့.
ကောင်းပြီကျနော်တို့ဘုရားသခင်၌ခန့်မှန်းရခက်၏ဒီမျိုးကိုမမျှော်လင့်သင့်ပါ. ဘုရားသခင့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နည်းလမ်းများအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်. ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နည်းလမ်းများစွာအတွက်ခန့်မှန်းရခက်သည်, ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားမှသူ၏တုန့်ပြန်နှင့် ပတ်သက်. ခန့်မှန်းရခက်ဘာမှမရှိဘူးင်. ဒါဟာသူ့ရဲ့အမျက်ဒေါသတုံ့ပြန်ပြောခြင်းငှါ. သူကအာဒံနဲ့ဧဝကိုကတိထားတော်, သူတို့ထံမနာခံလျှင်သေကြလိမ့်မည်ဟု. သောကြောင့်အပြစ်တရား၏သူဟာမြေပြင်ကိုတက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တောလည်ရာအတွက်မရဏာနိုင်ငံကတဆင့်လူကိုဆင်းကျဆင်းသွား 15. ထိုဖြစ်ရပ်များအတွက်ဒီဆာလံမှာသွယ်ဝိုက်ဖော်ပြထားတဲ့, ဘုရားသခင်သည်တကြိမ်သည်နောက်တဖန်အမျက်ဒေါသနှင့်အတူတုံ့ပြန်. သိန်သညျဘုရားသခငျရဲ့အမျက်ဒေါသတုံ့ပြန်ပြောခြင်းငှါ.
တကယ်တော့, ဘာသာပြန်ထားသောင်သောထားသောစာပိုဒ်တိုများ ထိုလူမျိုးကိုငါအမျက်ထွက်ခဲ့သည်, ပိုပြီးစာသားနည်းလမ်းများ "လူမျိုးကိုငါကိုရွံ့။ " ဒါကအများအပြားဘာသာပြန်ချက်များကိုပြောတဲ့စကားကိုင်. ဒါဟာရွံရှာ၏ဤအရုပ်ပုံဆက်သွယ်. ဘုရားသခငျသညျကွောငျ့သူတို့ပြုမူင့်ကိုဘယ်လိုများ၏ဤလူတို့နှင့်အတူရွံရှာသည်တိုင်အောင်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်ငါတို့မေးခွန်းဖြေဆိုရန်, ဘုရားသခငျသညျအမျက်ထွက်ရပါဘူးသူတစ်ဦးပြင်းထန်သောနှင့်အတူယခင်မျိုးဆက်၏အပြစ်တရားမှတုန့်ပြန်, သန့်ရှင်းသော, စက်ဆုတ်ခြင်း.
ယခုငါသည်ဤမေလသိ, ဘုရားသခငျ၏လူတချို့ရဲ့အယူအဆချီပွတ်သပ်. သူတို့ကထင်, "ကောင်းပြီသောသင်တို့၌အကြောင်းပြောနေတာင်အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျမင့်. အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျအမျက် ထွက်. မရပါဘူး. အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျသည်ဟုဆိုဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ "ကောင်းပြီသင်မှန်စေခြင်းငှါ. ဒီတစ်ခါလည်းသငျ၏ဘုရားကမပြောလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ကမျြးစာကို၏ဘုရားသခင့်ဒီစာသားထဲမှာကဒီမှာကိုပြု.
ဒီတော့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်? ဿုံဘယ်လိုနိုင်တဲ့တစ်ဦး, သန့်ရှင်းသောဘုရားသခငျသညျဒါတသမတ်တည်းကိုတောင်ရွံရှာပြင်းထန်သောအမျက်ဒေါသဖြင့်တုံ့ပြန်နှင့်? ငါတသမတ်တည်းအမျက်ဒေါသနဲ့ငါ့ဇနီးမှတုန့်ပြန်နှင့်သူမ၏မှာအော်ခဲ့လျှင်, ငါ့အစိတ်အပိုင်းအပေါ်တစ်ဦးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအပွစျကိုဖြစ်လိမ့်မယ်. ဘုရားသခငျ့အမျက်ဒေါသ, သော်လည်း, ငါတို့ကဲ့သို့အပွစျရှိမဖြစ်. ဒါဟာဇာတ်ကောင်အပြစ်အနာအဆာမဟုတ်ပါဘူး.
ငါသည်ဤတရားကိုဟောပြောအဖြစ်, ငါတစ်ဝှမ်းခြေချောင်းရေသွန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရသို့မဟုတ်ညျဘုရားသခငျ၏အမျက်ဒေါသသည်အတောင်းပန်ပါတယ်ပါဘူး. တဖန်သင်တို့ဖြစ်စေညျဘုရားသခငျ၏အမျက်ဒေါသနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ Non-ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေများမှတောင်းပန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရမထားသင့်. ဒါမှမဟုတ်ငရဲအကြောင်း. တဖန်သင်တို့ညျဘုရားသခငျ၏အပွစျရှိအတိတ်အကြောင်းကိုအချို့သောလျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားခဲ့သည်တူဓမ်မဟောငျးကမျြးအတွက်သူ၏တရားသဖြင့်စီရင်အကြောင်းကိုရှက်ဖြစ်ရန်မလိုပါ.
ဘုရားသခငျ့အမျက်ဒေါသသည်အပြစ်ဖြေမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာသန့်ရှင်းသောဘုရားသခငျသညျပွစျမှားတုံ့ပြန်မှုကိုလမ်းဖွင့်. ဒါဟာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်ဆင်းယောက်ျားထံမှနတ်မင်းကြီးပုန်ကန်မှုများနှင့်နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုမှသာသန့်ရှင်းသောတုန့်ပြန်ဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့စံမှဘုရားသခငျသညျနှငျ့အညီဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့, သူကစံသောကွောငျ့. ကျွန်ုပ်တို့၏အမျက်ဒေါသအပွစျရှိသည်, ကျွန်တော်တို့အပြစ်များသောသူဖြစ်သောကြောင့်. သို့သော်တစ်ဦးဿုံသန့်ရှင်းသောဘုရားသခအဖြစ်သညျဘုရားသခငျကိုသာတစ်ဖြောင့်မတ်လမ်းအတွက်အမျက်ထွက်စေနိုင်ပါတယ်.
သိန်သညျဘုရားသခငျမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်. ထိုသို့ဘုရားသခင်ကိုအစဉ်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်. ထိုအတိုင်းအပြစ်သားတစ်ဦးအမျက်ထွက်ဘုရားသခင်အားဖြေဆိုရန်ရှိသည်လိမ့်မည်, သူတို့ကိုရည်ရွယ်တစ်နည်းနည်းနဲ့ညျဘုရားသခငျ၏အမျက်ဒေါသ၏စောင့်ရှောက်မှုယူနိုင်ပါသည်မဟုတ်လျှင်.
လြှောကျလှာ: တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာပြစ်မှားကြသောအခါ, ကျွန်တော်တို့ကမဆိုးရဲ့စဉ်းစားရန်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနေ. ငါခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ရှေ့၌ငါသိ, နှင့်ပင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုနောက်မှ, ငါကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်အဖြစ်အပြစ်တရား၏အထင်မပြုခဲ့. ငါစဉ်းစားအားလုံးငါအချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုခြိုးဖောကျခဲ့ကွောငျးကွောငျ့သျောထိုသို့ဖွင့်. ငါလုံလောက်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ခြင်းမခံခဲ့ရ. ကောင်းပြီအပြစ်တရားလုံလောက်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ရုံပျက်ကွက်ထက်ပို. အများဆုံးသစ္စာစောင့်သောပုဂ္ဂိုလ် - ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆန့်ကျင်သည့်ပြစ်မှုဖြစ်ပါသည်. ထိုအကြောင့်လူတစ်ဦးဝမျးနညျးကိုယ်တော်အမျက်ထွက်စေသည်. ဘုရားသခငျသညျအပွစျကိုမုန်း.
ဒီတစ်ခါလည်းသော်လည်းသင်ကျေနပ်အောင်မထားဘူးကြောင်း. ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်ဘုရားသခင်၏ overreacting သည်ထင်. ငါတကယ်သူကအနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံးအမျက်ထွက်တော်မူခဲ့ဆိုလို? သူကတစ်ဦးအာဃာတကိုင်ဆောင်ရဲ့တူအသံ. သေး၏ကြင်နာအသံ, ဘုရားသခ. အဘယ်ကြောင့်ကိုယ်တော်ဒါအရူးလုပ်ပေ? ကောင်းပြီနှစ်ခုထောက်ပြဖို့ကျွန်မကိုတတ်၏.
II ကို. သိန်တစ်ဦး Alternate Path ကို Is
ကျမ်းပိုဒ်မှာကြည့်ပါ 10 နောက်တဖန်. ဘုရားသခငျသညျဤလူမြိုး၏ဖော်ပြချက်ပေးသည်သူဟာအမျက်ထွက်ခဲ့သည်. သူကပြောပါတယ်, "သူတို့ကအဘယ်သူ၏စိတ်နှလုံးကိုလမ်းလွဲသွားတဲ့လူဖြစ်ကြ၏, သူတို့သည်လည်းငါ၏နည်းလမ်းများမသိကြ။ "
ဘုရားသခငျသညျသူတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌လှည့်ဖြားသွားကပြောပါတယ်. သူတို့ကပဲသူတို့၏လုပ်ရပ်ကိုလမ်းလွှဲပြင်ပမှမသွားဘူး. ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုဖြစ်လျက်ရှိအတွက်, သူတို့နေသော၏အဓိကမှာ, သူတို့လမ်းလွဲသွား.
ငါရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ဖြစ်ပျက် - ငါလုံးဝအဓမ္မဆိုလို - လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အတူ. ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာငါ့ဇနီးတစ်ခုခုရသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုပယ်စက်စက်မှတစ်နေရာရာမှာငါ့ကိုလွှတ်လိမ့်မည်နှင့်လည်းကောင်းငါသူမ၏သို့မဟုတ်ပါကမခေါ်ဘဲလုပ်ကြဘူးငါ့ကိုငါးကြိမ်ကြာရှည်စွာအဖြစ်. သူမ၏လမ်းညွန်မကောင်းတဲ့ခဲ့ကြသောကြောင့်, မင့်, ငါကမှားအလှည့်ဖြစ်စေမှားလမ်းသွားနှင့်လှည့်ဖြစ်တာကိုရဲ့.
ကောင်းပြီဒီသူဟာသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုလမ်းလွှဲသွားပြောပါတယ်သည့်အခါကဒီမှာခြယ်ရဲ့ရုပ်ပုံ၏မျိုး. သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမှားယွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုချခရီးသွားလာခြင်းနှင့်မှားရာအရပျမှသူတို့ကိုဦးဆောင်. သူတို့ကပျောက်ဆုံးနေ. ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်၏ဟုဆိုနိုငျ. လူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်မယ့်ပြင်ပထက်ပို, ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုမှားလမ်းညွန်သွားကွောငျ့ဖွစျပကျြ. နှင့်ငါတို့လုပ်ရပ်အတိုင်းလိုက်နာ.
ထိုအခါသူကလည်းပြောပါတယ်, "သူတို့ကငါ့လမ်းကိုမသိရပြီ။ " ဘုရားသခငျ့ဇာတ်ကောင်သူတို့ရှေ့မှာအပြည့်အဝပြသခဲ့ - ကရုဏာတော်နှင့်တန်ခိုးတော်, စသည်တို့ကို. ထိုသူတို့ကိုကိုယျတျော၏နည်းလမ်းများအတိုင်းလိုက်နာရန်ပညတ်တော်မူ၏ပေး၏, သူ၏လမ်းကြောင်းကိုလိုက်လျှောက်ရန်. ဒါပေမယ့်အစားသူတို့အခြားလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ရန်ရွေးချယ်. သူသည်ဖါရောဘုရင်ထံမှအပ်တော်မူ၏သောသူရဲ့ဧဒုံပင်လယ်ကွဲ! သူတို့ကကိုမြင်လျှင်ပြီးနောက်ကိုယ်တော်မကိုးစားမယ်လို့မယုံနိုင်စရာဒါဟာင်. သူတို့ကသူ့ရဲ့အမှုတို့ကိုမြင်ရသော, ဒါပေမဲ့သူတို့သူ၏နည်းလမ်းများမသိခဲ့ပါ.
ခရစ်ယာန်, သငျသညျပွစျမှားကြသောအခါဤသူသည်သင်တို့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာအဘယျသို့ဖွစျသညျကိုသငျသညျသတိပြုမိကြသည်? သင်ရုံမြင်းပယ်ကျသွားသို့မဟုတ်သင့်အပြည့်အဝအလားအလာတိုတိုမလာပါတယ်ဒါကြောင့်? သငျသညျဘုရားသခငျသညျသင်တို့အဘို့အထွက်သတ်မှတ်ထားသောတတစ်အခြားလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ကြသည်. သငျသညျတကားဟုင်, "ဘုရားသခ, ငါသည်သင်တို့၏အကျင့်တို့ကိုမြင်ရပါတယ်ငါကသူတို့ကိုသဘောမကျဘူး. ငါသည်သင်တို့ကိုအကြှနျုပျအသကျရှငျချင်ပုံကိုသတိပြုမိရယ်, ငါသည်ငါ၏လမ်း သာ. ကောင်း၏ထင်. ငါသည်သင်တို့ထက်သင်နှင့်ပိုကောင်းတဲ့သခင်ထက် သာ. ပညာဖြစ်၏. ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့သွားတယ်။ "ဒီမတရားသောအမှုဖြစ်၏. ဤရွေ့ကား, ငါတို့သည်ပြစ်မှားအခါတိုင်းအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်ပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်တရားသည်ဤအပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်း၏အပြစ်ထက်မ သာ. ကောင်း၏, သံသယ, ဤစာသားမှမတရားသောသူသည်မျိုးဆက်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်တရား၏အမှန်ကန်စွာစဉ်းစားရန်ရှိသည်, ကျွန်တော်သင့်တူသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုမုန်းမည်မဟုတ်. ကမှန်ကန်စွာအပြစ်မြင်ဖို့ကြာသမျှအတိုင်းပြု. ဒါဟာအရုပ်ဆိုးင်. ကတော်တော်လေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့. ကျနော်တို့တောင်မှကျွန်တော်အကြောင်းပြောဆိုလမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုပေမည်. ကျနော်တို့သာအိုး "အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်တရား၏အထင်မနေသင့်, ငါစစ်တိုက်ခြင်းငှါပျောက်ဆုံး. သို့မဟုတ်ပါ, ငါသည်ဤအတူရုန်းကန်နေရတာပါ။ "အဘယ်သူမျှမငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏စကားနားမထောင်ဖို့ရွေးချယ်. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမှာထားတော်မူသောအရာကိုထက်အခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကို ရွေးချယ်., ကျွန်တော်တို့သူကပြောပါတယ်အဘယျသို့မကြိုက်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. ဒါကအပြစ်တရား၏အရုပ်ဆိုးအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်. ထိုအပင်ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကျင့်ချင်သောသူယုံကြည်သူများအဖြစ်, ငါတို့သည်ငါတို့၏အပြစ်တရားပေါ်တွင်လက်ျာဘက်ရှုထောင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကိုတိုက်ခဲ့ကြ.
Ralph Venning ရပ်တည်ချက်အောက်မှာကိုကူညီပေးသည် သိန်အပြစ် လာသောအခါသူကပြောပါတယ်, "တိုတိုပြောရရင်, အပြစ်တရား၏ဘုရားသခငျရဲ့တရားမျှတမှုဝံ့သည်, မိမိသနားခြင်းကရုဏာတော်၏မုဒိမ်းပြုကျင့်, မိမိအသည်းခံခြင်း၏လှောင်ပြောင်ခဲ့တယ်, တန်ခိုးတော်အနည်းငယ်, သူ့မေတ္တာများ၏မထီမဲ့မြင်. ကျနော်တို့အပေါ်သွားနဲ့ဟုပြောစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်မိမိအ Providence ၏ကဲ့ရဲ့သောဖြစ်ပါသည်, ဂတိတော်များ၏ကဲ့ရဲ့, မိမိပညာ၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို။ "
အဆိုပါဆာလံဆရာကသတိပေးဤနေရာတွင်ပေးသည်စကားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်, "သင်၏နှလုံးကိုခိုင်မာစေပါဘူး။ " အခြေခံအားဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ကို ပို. ပို. ခေါင်းမာဖြစ်လာနှင့်ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တို့ကိုငြင်းပယ်ကြပါဘူး. သတိအဖြစ်ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ကိုသက်ဆိုင်ကြောင်း. ဟဗွေဲလူတို့၏ရေးသားသူဤအပိုင်းကိုဖွင့်ရွေးနဲ့ကွာကျသွားဆန့်ကျင်ဟဗွေဲသတိပေးအဘယ်ကြောင့်ဤသူကား.
သငျသညျခေါငျးမာမာဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တို့ကိုပယ်ချလိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျစိတျနှလုံးအချိန်ကျော်ခက်ခဲများနှင့်ခက်ခဲရရှိသွားတဲ့. တကယ်ပဲခဲယဉ်းစိတ်နှလုံးကိုများသောအားဖြင့်အချိန်ရဲ့ရှည်လျား span ကျော်ဖြစ်ပျက်, မနေ့ချင်းညချင်း. ကျနော်တို့နောင်တမယူဒုစရိုက်အပြစ်၌ထအဆုံးသတ်သူမျိုးဖြစ်ဘယ်တော့မှထင်, ငါတို့မူကားတတျနိုငျသ. ငါတို့သည်တဖန်ကျော်နှင့်ထပ်ခါထပ်ခါငယ်သောအရာတို့ကိုထဲမှာဘုရားသခင်ကိုမနာခံဖို့ရှေးခယျြသောအခါတကယ်ပဲခဲယဉ်းစိတ်နှလုံးကိုအချိန်ကျော်ဖြစ်ပျက်. ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်ရှု, အဲဒီမှာသေးငယ်တဲ့မုသား, နှင့်အချိန်ကျော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်မှားနှင့်ကတရားမျှတမှစလုပ်ဖို့ desensitized ဖြစ်လာ. ထိုအခါသင်ကသိမီက, ကျနော်တို့ဟန်ဆောင်နေတာပါ, ကျွန်တော်တို့ဟန်ဆောင်၏ပင်ပန်းရလုံးဝမသညျယရှေုကိုအောက်ပါရပ်တန့်သည်အထိ. သူတို့ကိုအသေးငယ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုအမှန်တကယ်ကြီးမားများမှာ.
ဒါကြောင့်သင်ဒီမှာယနေ့နေနှင့်အချို့သောအပြစ်တရားသည်သင်၏အသက်တာ၌ဆက်လက်ရှိနေရန်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်, နောင်တရ! ယခု! အခြားသူများအားအပြစ်ဝန်ခံ. သငျ့နှလုံး hardening ၏ဤသံသရာကိုစတင်မနေပါနဲ့. အဲဒီအစားသင်၏အကျင့်ယုံကြည်ကိုးစား၏, သူ၏သိ. သူ၏အကျင့်ဓလေ့ကိုလိုက်နာပါ. ယရှေုသညျကိုးစားကြနှင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်. သူသည်သင်တို့ကိုချစ်သောသူနှင့်သင်သင်တို့၏ကောင်းသောအဘို့ပညတ်တော်မူ၏ပေးတော်မူပြီ. သူ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်နာပါ.
အိုကေ, ဒါကြောင့်ဘုရားသခင့်အမျက်ဒေါသတခုအခြားလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်သည်အပြစ်နှင့်အပြစ်တရားအားဖြင့်သူတို့ကိုနှိုးဆော်တိုက်တွန်းသည်. ဘာဖြစ်သလဲ? ဒီအခြားလမ်းကြောင်းရွေးချယ်ရာတွင်၏အကျိုးဆက်ကဘာလဲ?
III ကို. သိန်သညျဘုရားသခငျရဲ့ကြွင်းသောအရာထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်
ဒါကြောင့်ငါသည်အမျက် ထွက်. ကြိနျဆိုအပေါ်ကြေငြာ, "သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့မဝင်ရကြလိမ့်မည်။ "
အကျိုးဆက်များညျဘုရားသခငျ၏အမျက်ဒေါသသည်ထိုများမှာ, သူကသူတို့ကိုအပြစ်ပေးမည်. ဒီအထူးသဖြင့်အဖြစ်အပျက်အတွက်, ဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုလွှတ်, ဒါပေမဲ့သူကသူတို့ကိုကတိထားရာပွညျထဲဝငျဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး. သို့သော်အချိန်အားဖြင့်ဆာလံဆရာကဒီရေးသားခဲ့သည်, ဘုရားသခင်၏လူပြီးသားသို့ဝင်ပါပြီ. ဒါကြောင့်သူသညျဘုရားသခငျ၏ထာဝရကြွင်းသောအရာအကြောင်းပြောဆိုရန်ဤစာသားကိုကိုအသုံးပြုသည်. ဤရွေ့ကား, ဟဗွေဲလူတို့၏စာရေးဆရာလည်းအသုံးပြုဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုထည့်နိုင်ကြောင်းကိုထာဝရအရာကြွင်းလေသမျှရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့အပြစ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏အမျက်ထွက်ရပေမသာကြောင်းဤနေရာတွင်ကြည့်ရှု, သို့သော်သူ၏အမျက်ဒေါသအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကန်စေသည်. တကယ်တော့, ဤကျမ်းပိုဒ်၌အတော်အမျက်ဒေါသအတွက်ကျိန်ဆိုစေသည်. သူကအစောပိုင်းကကိုးကားတယောက်မပြုပြောပါတယ်အတိအကျဘာတတ်. သို့သော်သူ့အမျက်ဒေါသငါတို့ကဲ့သို့အပွောငျးအလဲမဟုတ်ပါဘူး. ဤအချက်များအားလုံးနှင့်လူ့အမျက်ဒေါသအပွစျရှိကြောင်းပြောပါသည်မဟုတ်. သို့သော်သူ၏ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှ. အမျက်ဒေါသကိုယ်တော်ကို intoxicate နှင့်မိုက်မဲသောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်ကိုယ်တော်ကိုမရွှေ့ပါဘူး. အစား, သူ၏အမျက်ဒေါသအဆင့်သို့ဦးတည်နေသည်, သန့်ရှင်းသော, သူဆဲကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်တရားမျှတမှုနှင့်အတူတုံ့ပြန်.
ဘုရားသခငျ၏ထာဝရကြွင်းလှပ, ငြိမ်းချမ်းသော, Non-စိတ်ဖိစီးမှုများ, ဘုရားသခင်သည်သူ၏စစ်မှန်တဲ့လူအပေါငျးတို့သထအဆုံးသတ်မည်အရပ်ကိုဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း. ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကိုအဘို့သန့်ရှင်း၏, ရုံ, ကွောကျဘှယျသော, သူတို့ထိုက်အဘယျအရသူများအတွက်ကံကြမ္မာခွောကျတတျသော [reword]. ငရဲ၌အဘယ်သူမျှမကြွင်းသောအရာရှိပါသည်. အဘယ်သူမျှမကယ်ဆယ်ရေးစခန်းငရဲထဲမှာရှိပါတယ်, ဆငျးရဲဒုက်ခအမျက်တော်သည်သာ. အကြှနျုပျတို့သကာတပ်မတော်၏အမျက်တော်တစ်ခုသို့မဟုတ်လူကိုအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးထာဝရအဘို့သင့်ခေါင်းပေါ်မှာတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်. ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကိုသာအဓမ်မဟောငျးကမျြးထဲမှာမတည်ရှိပါဘူး. သူကဆဲသည်ယနေ့အပြစ်တရားကိုမုန်း. ငါတို့သည်ဤအံ့သြဖွယ်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သင့်ပါတယ်. မိမိတို့အပြစ်ကိုညျဘုရားသခငျ၏ကြွင်းသောအရာမှသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်, နှင့်ငါတို့အရမ်းနိုင်.
ဒီကဒီမှာလူတိုင်းအဘို့ဤညဦးယံ၌. သငျသညျအသေခံပြီးနောက်, သငျသညျဘုရားသခငျ၏ချမ်းသာထဲသို့ဝင်သို့မဟုတ်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကိုခံနိုငျရလိမ့်မည်ဖြစ်ဖြစ်. သူတို့သာ options နှစ်ခုရှိပါတယ်. ကြှနျုပျတို့အားလုံးဒုတိယ option ကိုထိုက်. ကြှနျုပျတို့အားလုံးသူအကြောင်းပြောသွားအပြစ်ရှိသောမျိုးဆက်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကြောင့်,. ငါတို့သည်ကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုသွား. ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌လှည့်ဖြားသွားနှင့်သူ့နည်းလမ်းများအတိုင်းလိုက်နာကြပါဘူး. ကျနော်တို့ထပ်ခါထပ်ခါဘုရားသခငျသညျအမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောအလွန်အမှုကိုပွုနှင့်ကျော်နောက်တဖန်င်.
တွင် 1 သက်သာလောနိတ် 1:10, ပေါလုသည်ဤစကားများအားဖြင့်ဂါလိလဲပြည်ကနေလူကိုဖော်ပြထားတယ်, ကောင်းကင်ကနေ "သူ၏သားတော်ကို, သူသည်သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသော, လာမှအမျက်တော်မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်သောယေရှုကို။ "
နောက်ပိုင်းတွင်အတွက် 5:9-10 သူယုံကြည်သူများအားမိန့်တော်မူ၏, "ဘုရားသခအမျက်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဖို့မမူသည်ကို, ဒါပေမဲ့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်, ငါတို့သည်သူ့ကိုနှင့်အတူအသက်ရှင်စေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့နိုးသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ရှိမရှိဒါကြောင့်သူကိုငါတို့အဘို့အသေခံတော်မူ၏။ "
"ဒီခုနှစ်တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကိုချစ်ကြသောသူမူကားငါတို့ကိုချစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်အရာ၌ဖြစ်သူ၏သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသောမဟုတ်ပါဘူး။ " 1 ယောဟနျသ 4:10
ခွက်ရှိ၏, ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကိုသွန်းလောင်းရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်းပြင်းထန်သောဒေါသအမျက်မျက်နှင့်ပြည့်ဝ၏. ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့အဘို့, ကျွန်တော်ဒေါသအမျက်ကိုသည်းခံရန်မလိုပါ. အစား, ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ခေါငျးပျေါကနေခွက်ကိုယူခဲ့ပြီးသူကပြောင်းရွှေ့မယ့်. ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့အဘို့, သူကကျွန်တော်တက်သိမ်းဆည်းထားသောဒေါသအမျက်ကိုယူ, တစ်ဖလား၌ကအားလုံးကိုသွန်းလောင်း, သားတော်ကို၏ဦးခေါင်းကိုကျော်ကကိုတင်တော်မူကိုယ်တော်ပေါ်မှာရှိသမျှသွန်းလောင်း. အလွန်ကြီးစွာသောအဘယျသို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ! ယေရှုသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်ဆိုးသောသူတို့အတှကျဘုရားသခငျ၏ကြောက်စရာအမျက်တော်သည်တည်ကြည်ခြင်း. သူကကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ, ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်သောဘုရင်အဖြစ်သုံးရက်အကြာတွင်သူ၏သင်္ချိုင်းမှထမြောက်. ယရှေုသညျပြောပါတယ်, "ကျွန်တော့်ဆီလာပါ, အဘယ်သူသည်အလုပ်သမားနှင့်လေးလံသောများမှာဆောင်သောအားလုံး, သင်တို့ကိုငါချမ်းသာပေးမည်။ " (မဿဲ 11:28)
ဧဝံသောသူတို့အားဤအယေရှု၌သူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုသွင်းထားသောသူသည်- ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုထွက်ခွာသည်မျှအမျက်ဒေါသရှိပါတယ်. ခရစ်တော်အတွက်, ဘုရားသခင့မရှိတော့ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူအမျက်ထွက်သည်. ကြှနျုပျတို့အပွစျသောအခါသူကျွန်တော်တို့ကိုမှာဝမျးနညျးင်, ငါတို့မူကားထိုသူတို့အဘို့အပြစ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ. အဘယ်သူ၏အပြစ်ကြောင့်အထံတော်သို့ဆန့်ကျင်ထင်မှတ်ကြသည်မဟုတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ.
ထိုအခါငါတို့သည်ခရစ်တော်ကို၌ခိုလှုံဖို့တည်လျှင်, သူပြန်လာတဲ့အခါအစားကြောက်မက်ဘွယ်သောအများဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ကိုယ်တော်ကိုခံနိုငျ. အကြှနျုပျတို့မနာသီချင်းဆိုနိုင်, "ဒါတောင်မှသူကငါ့ဝိညာဉ်နှင့်အတူကောင်းစွာဖြစ်၏။ "
Evan • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2015 တွင် 9:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ခရီးစဉ်ကို. I wanted to get your take on something because you have been someone who has playedabig role in my walk with Christ. This will be long, so if you don’t get around to it, I understand.
As I spent more and more time in the word, there were scriptures that would come up that shook that trust/grace foundation that I described earlier and took me back to my childhood. My father especially (who was young in the faith at the time, so I don’t hold it against him) was very quick to stress God’s justice without balancing it with teaching about his mercy. ဥပမာ, he taught me atavery young age that I must repent of all my sins in order to be saved, that many Christians will be in forarude awakening on Judgment Day because they think that Jesus will welcome them when they still break God’s law, စသည်တို့ကို. He was huge on speaking in tounges, many other things but didn’t hit much on the trusting God part.
As more and more doubts crept in and I became deeply interested in theology, somewhere along the line I setapattern of trying to take things into my own power and figure everything out intellectually instead of drawing close and waiting on God. I can’t tell you how many hours I’ve spent researching theological stuff, unanswered questions, looking up scriptures in Greek, စသည်တို့ကို. on the internet this last year. My thought process has been “Well if Jesus has all of these conditions, then I need to make sure that I meet the conditions.” Thus, my walk became intellectual and perfectionistic. What was once so simple became utterly complicated, my trust was crippled, and thus I’m still inapretty burdened time in my walk with Christ right now.
I notice two opposing unbalanced camps within Christianity and I’m sure you may agree- 1) an “obedience” camp and 2) ယရှေုသညျကအားလုံးကိုပေးဆောင်” camp. The obedience camp is quick to stress our responsibility and usually references the synoptic Gospels, revelation, the OT, စသည်တို့ကို. The Jesus paid it all camp stresses trusting him alone and seems to rely very heavily on Paul. When I first started walking with Christ, I definitely had the mindset of Camp 2, but the more I studied the Scriptures and (ဝမ်းနည်းစွာ, the opinions of men on the internet) I became very startled about doubting my understanding of the grace that changed my life. Camp 1 is great about stressing God’s righteousness and unchanging nature but seems to try to manufacture obedience from fleshly willpower. They will reference stuff like the “Lord, Lord… I never knew you” scripture. Camp2is great about stressing God’s forgiveness and the sunshine and rainbows stuff, but portrays God as if he is two completely different people from the OT to NT. They’ll reference that nothing can separate us from God’s love and that type of stuff. God’s truth has to be somewhere in the balanced middle, မှန်သော? My goal is just to know God for who He says He is and haveabiblical balanced understanding of all of his attributes. I’m having the hardest time getting back to just trusting him and being in relationship with him because I’m constantly worried about “not being able to figure everything out” (I’m relying on my own understanding terribly). The only thing that I take comfort in right now is this- Getting back to walking and talking with God and trusting that He will take this thing wherever he needs to take it if I would just trust him to do it. If he has all of these conditions, then my job is to trust that his grace will help me meet them.
Much Love, ခရီးစဉ်ကို.
Liz • သြဂုတ်လ 10, 2016 တွင် 8:52 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I saw your angst, and you’re right. There are basically two camps when you look at the big picture. There is balance though, and I know you can receive it. I say receive rather than find because the Lord tells us, “knock and the door shall be opened”. Studying the Word is good, don’t stop. ဒါပေမဲ့, are you also in prayer? I’m not talking about praying withafeeling of obligation oralaundry list of requests. ဒါပေမဲ့, praying truly from your heart. It’s something to practice, I’ve been learning how to do it better myself lately. ပဌမ, praise God for who He is. Then ask for forgiveness, specific forgiveness. After that approach the throne with your concerns, worries and burdens. Wrap it up with more praise. There are some great apps out there that can help with this (Examen and Examine). Both are prayer apps thatafriend of mine highly suggests. I haven’t decided which one to do yet. I would also suggest reading the book, Fervent, by Priscilla Shirer. I am reading it right now. It’s about prayer and spiritual warfare and it’s been so great! Really eye opening. I am thinking more and more that in Western society we are spiritually asleep. We haveacasual approach to prayer and spiritual warfare isafairy tale – but it is all very real. You will find peace in prayer – talk with God about your questions. It’s okay to ask questions. I hope you’re able to see this and I hope it helps you Evan!
jimmy hayes jersey • နိုဝင်ဘာလ 24, 2015 တွင် 12:42 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Keenan Allen Jersey • ဒီဇင်ဘာလ 12, 2015 တွင် 12:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်